Ninyahoow Arimahaan Lamaantaada Boqorad Ayay Ka Dhigeeysaa Ee U Samee | alcarabiya.com
Home » Arimaha Qoyska » Ninyahoow Arimahaan Lamaantaada Boqorad Ayay Ka Dhigeeysaa Ee U Samee
Ninyahoow Arimahaan Lamaantaada Boqorad Ayay Ka Dhigeeysaa Ee U Samee	Waxaa jiraan xaalado gaar ah oo aad xaaskaaga uga dhigi karto iney tahay qof qaas ah,islamarkaana aad ku koolkoolin karta si aad u kasbato naxariisteeda,habka ugu wanaagsan ee aad ku tusi karto iney tahay qofkaas ah, Haweeney kasto waxey leedahay wax iyada ay ka hesho ama aaney ka helin,laakin waxaan kuu heynaa habab guud kaasoo qofwalbo uu ku xamaasadgelin karo xaaska aad jeceshahay.
U sharax dareenkaaga
Wax dhib ah malahan sida aad u jeceshahay iyo taageerada aad u heyso naagta aad jeceshahay hab qarsoon,laakin haween looma qancin karo in ka dheer si aanan loo cabirin. Wadada ugu wanaagsan oo aad ugu caddeyn karto hadal ahaan ama waad u qori kartaa warqad yar oo gaaban oo jaceyl aj si aad u tusto jaceylkaaga.
Waxaad kale xitaa sawirankartaa kaar islamarkaana waxaad ugu xardhi kartaa dareenkaagaa ereyo qalbiga jilcin karka.
Sii waqti iyo arimo ay kula wadaagto
La wadaag waqti tayo leh gacalisadaada, haweenku wey jantaan iney helaan dareenka aan kala qeybi Karin,La qeybso xiisaheeda,dareensiina in xilli walbo aad farxad siin karto.
Dhageyso adigoon aanan ku sameyneyn wax ka dhexgalid ah,weyna ku ixtiraami doontaa,islamarkaana ku fahmi doonaa.
Ka dhaqaaji Tvga iyo Mobileka si aanu hakad kaaga helin inaad wax walbo aad fariintaada si sahlan ugu gudbiso. Xarakaad yar yar uga dhig maalinteeda,kana fogeey xiriirada dhibaatooyinka leh ee noloshaada soo maray.
Qorsheey maalmaha nasashada
U kexeey meel ay jeceshahay iney aado, sii hawo uguna deeq iney ilowdo howlmaalmeedyadeedii maskaxda ka mashquuliyey,waa hanaanka aad uga dhigi karto qof qanacsan.
Xusuusnoow maalmaha muhiimka u ah.	naad Xusuusnaato sanadguurooyinka dhalasha gacalisadaada waxey ka dhigeysaa iney dareento mid gaar ah,waxeyna dareemeysaa in si gaar ah looga fekero oo la daneynaayo.
La saaxiib qoyskeeda iyo asaxaabteeda.
Hadii aad ka agdhawaato qoyskeeda iyo saaxiibada gacalisadaada waxaad ku kasban kartaa iney si gaar ah kuu xushmeyso,maadaama aad u muujisay inaad tahay qof wax cad wata.
Noqo qof taageero ula garab taagan gacalisadaada,hilmaamsii maalmaha murugada iyo dhibaatooyinka,hana ku eedeyn culeysyada nolosheeda ku soo kordha.
Ha siin amaro,laakin noqo marwalba mid la tashta xaaskiisa arimaha idiin quseeya labadiinaba,qaado fikradeeda meelo badan oo la xiriira mihnadeeda,shaqadeeda,cafimaadkeeda iyo arima kale.
Weydii iney kaala qeybqaadato soojeedinteeda hababka shaqooyin la mid ah.
Niman badan ma jecla iney gacmaha la galaan howlaha guriga amaba waa ay ka faanaan,marka ay arkaan nin xaaskiisa howlaha guriga la qabanaayana waa lagu caayaa,laakin aqriste ma ogtahay inaad xaaskaaga ka garabsiiso mashquulka howlaha guriga iney ka helo jaceyl badan iyo naxariis,
Haweenka aad ayey uga helaan ninka ay xiriirka leeyihiin marka uu sawirkeda shaashada hore ee mobilekiisa saaran tahay,waxeyna siisaa amaan,maadaama uusan cidna kala gambaneyn rabitaankeeda,islamarkaana waxaa ka dhalata kalsooni iyo ififaalo wanaagsan, talaabadaas yarna waxey dhalisaa iney dareento iney muhiim tahay.
9 Responses to Ninyahoow Arimahaan Lamaantaada Boqorad Ayay Ka Dhigeeysaa Ee U Samee	hamse Reply
September 7, 2013 at 9:06 am	dumarku waa astan ay leeyihin diidmo iyo yeelitin ,marba markay jecladan,dumarku wa dhowr nooc mid waayo arag ah iyo mid an wax qibrad ah laheyn,xaga iyo nolosha raga,hadad ku dhahdo heblayo wan ku jeclahay danbi u ah o moodo in ad caayayso,midna wa midku riyaqdo,hadalada sarbeebka ahna u daran dumark,lkin,ka ilaali naagaha hadal macan mid khalafsan mahane,sababto ah dumarku qalafsanantey wax ku leeyihin
lacayl hayo Reply
September 6, 2013 at 5:46 am	Waaw wn raadinaayay website kan oo kale aniga sidaad ujedanba wxn ahy wil jacaylka udhago nugul waayo sidaydaba wxn ahay qof daacada marka gabdh ayn jecladay iyana wy ijeceshahy marka wxn donayaa ind ila talisan
iiwad sheekada Reply
September 4, 2013 at 6:28 am	Aqristoow qoraalka wixii ku qanciyaahi ka qaado ileen waajib kuguma ahane tankale sawirka xaaskaaga ani ahaan shaashada masaaranaayo waayo qof ayaa dirsan karo anigoon ogolayn!!!!
September 1, 2013 at 11:07 pm	caajis wax cusub ma haysan waxan aad soo celcelinaysan iska dhafa waxyalo xaqiiq ku salysan ku hadla
September 1, 2013 at 10:20 pm	haday dido iyada iska leh mxa
September 1, 2013 at 8:41 pm	Asc Bahda al carabiya waxan ahay wil gur don ah, marka sideen baahidayda website kaan ugu soo ban dhiga maadama ay daacad iga tahay guur xalaal ah aana baahi u qabo wsc.
September 3, 2013 at 9:45 pm	hhhh qalad mayna kalin de gbdhs
H Y CABDI Reply
September 1, 2013 at 6:07 pm	fardowso adiga waxa aad jeceshahay ayaa ka hadashay lakin gabadha hadii ay ninkeeda u diido cambarka maxaa lagu sameenaya naagtas illeen qalad bey gashay
September 1, 2013 at 1:00 pm	Masha,alla fardowso qora sare waxa iqanciyay talajedinta mahadsanidin bahda alcarabiya